Wararka - Waxaan rajeyneynaa warshadaha waraaqaha jiingada ee adduunka 2021
Sidaan wada ognahay, 2020, dhaqaalaha adduunka si lama filaan ah ayuu ula kulmaa caqabado lama filaan ah. Caqabadahaasi waxay saameeyeen shaqaalaysiinta caalamiga ah iyo baahida badeecada, waxayna caqabad ku keentay silsiladaha sahayda ee warshado badan.
Si si wanaagsan loo xakameeyo faafitaanka cudurka, shirkado badan ayaa sidaas darteed xiray, dalal badan, gobollo, ama magaalooyin adduunka ah ayaa xiran. Faafida COVID-19 waxay si isku mid ah u dhalisay khalkhal ku yimid sahaydii iyo dalabkii adduunkeenna isku xiran. Intaa waxaa dheer, duufaantii taariikhiga ahayd ee Badweynta Atlaantik waxay sababtay hakad ganacsi iyo dhibaato nololeed oo ka dhacday Maraykanka, Bartamaha Ameerika, iyo Kariibiyaanka.
Muddadii la soo dhaafay, waxaan aragnay in macaamiisha adduunka oo dhan ay si isa soo taraysa u rabaan inay beddelaan habka ay wax u iibsadaan, taas oo horseedday koboc xoog leh oo ku yimid shixnadaha elektaroonigga ah iyo meheradaha adeegga albaab-ka-albaab kale. Warshadaha alaabta macmiilku waxay la qabsanayaan isbeddelkan, kaas oo keenay caqabado iyo fursado labadaba warshadeena (tusaale ahaan, kororka joogtada ah ee baakadaha jiingadaha ee loo isticmaalo gaadiidka e-commerce). Markaan sii wadno inaan macaamiisha u abuurno qiime annagoo adeegsanayna badeecadaha baakadaha waara, waxaan u baahannahay inaan aqbalno isbeddeladaan oo aan sameyno hagaajin waqtiyeysan si loo daboolo baahiyaha isbedelaya.
Waxaan leenahay sabab aan ku rajo weynnahay 2021 -ka, maxaa yeelay heerarka soo -kabashada ee dhowr dhaqaale oo waaweyn ayaa leh heerar kala duwan, waxaana la filayaa in tallaallo wax -ku -ool ah ay suuqa soo geli doonaan dhowrka bilood ee soo socda, si loo xakameeyo faafitaanka cudurka.
Laga soo bilaabo rubuca hore ilaa rubuca saddexaad ee 2020, wax -soo -saarka guddiga konteenarrada adduunka ayaa sii kordhayay, iyadoo kororka 4.5% rubuc -koowaad, koror ah 1.3% rubuca labaad, iyo kororka 2.3% rubuc -saddexaad . Tirooyinkani waxay xaqiijinayaan isbeddellada togan ee laga muujiyey waddamada iyo gobollada badankood qeybtii hore ee 2020. Kororka rubuc -saddexaad wuxuu u badnaa soo -saaridda waraaqo dib -loo -warshadeeyey, halka soo -saaridda fiilada bikraddu ay lumisay dardartii bilaha xagaaga, hoos u dhaca guud ee 1.2%.
Dhammaan caqabadahaas oo dhan, waxaan aragnay in warshadaha oo dhami ay si adag u shaqeynayaan oo ay siinayaan alaab kartoonno ah si ay u sii furnaadaan silsiladaha sahayda muhiimka ah si ay u geeyaan cuntada, daawooyinka iyo sahayda kale ee muhiimka ah.
Waqtiga dhejinta: Jun-16-2021
Nidaamka Rullaluudlaha, Shaashadda Hawlgalka Aqoon isweydaarsiga, A3 Faylka Waraaqda, Mashiinka Smart Waayo Xidhmada Waraaqaha, Gawaarida Xamuulka qaada, Bangiga Erp,